'Mkpu' ka Emechara, Director Shares Photo with "#ForWes"
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Mkpu' na-eze dechara, Director Shares Photo Na “#ForWes”
'Mkpu' na-eze dechara, Director Shares Photo Na “#ForWes”
by Trey Hilburn III July 7, 2021 2,499 echiche
Na-eti mkpu emecha emecha. Mgbe ọtụtụ njigide jidere n'oge oge mkpuchi, anyị abịarute. Emere ihe nkiri a na onye nduzi Matt Bettinelli tinye na Twitter ya wee kesaa onyonyo mara ezigbo mma iji cheta ụbọchị ahụ pụrụ iche.
SCREAM (2022) zuru ezu! Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu maka gị niile ịhụ ya n'oge na-adịghị anya. #Ihe kpatara
Bettinelli gwa. Onwe, M ka na-sentimental banyere Wes Craven na-agafe na ya na-anọghị ebe a ntinye nke Na-eti mkpu franchise.
M na-abụkarị onye na-eche na ọ bụ njedebe nke otu ìgwè mgbe otu n'ime ndị otu ahụ kwụsịrị ma ọ bụ nwụọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ụfọdụ ndị otu egwu Nkume Templelọ Nsọ Pilot na AC / DC nke na-ebu otu aha mgbe ndị na-abụ abụ Scott Weiland na Bon Scott gafere. Ha nọrọ oge ụfọdụ na-ele anya ma mesịa mee ka onye ọzọ banye ebe ahụ maka ndị na-abụ abụ ha. Mgbe ahụ, anyị nwere ìgwè ndị agha na-eme mgbe otu onye nwụrụ. Emechara. Echere m, Asmụ nwoke Beastie agaghịdị Arụ ọrụ n’enweghi onye otu ha furu efu. Yabụ, ọ na-emetụ m aka obere. O dokwara m anya na ọ bụghị naanị m.
Ihe niile kwuru, Na-eti mkpu Fans nwere nnukwu obi ụtọ banyere ntinye na-esote. Ọ na-enyere aka na otu ahụ na-etinye Wes n'ime obi ha mgbe ha na-arụ ọrụ na ihe nkiri. Mana, na ihe niile, echere m na ndị na-eti mkpu dị njikere maka ihe ndị ọzọ Na-eti mkpu mgbe ogologo nchere dị otú ahụ.
Ọ na-enyere aka na ndị nduzi, Bettinelli na Tyler Gilett dị oke egwu, dị jụụ, dị umeala n'obi. Ọ bụrụ na ọ bụ otu onye kwesịrị ịrụ ọrụ n'ime Wes Craven's Scream foundation ọ bụ Bettinelli na Gillett. Ndị a dudes nwere kediegwu lineup nke fim. Ma njikere ma ọ bụ na ọ bụghị na Southbound bụ ihe atụ na-enwu enwu nke nnukwu enyo na ụjọ na njedebe nke ha niile.
Ọ dịkwa mma ịhụ ndị na-alọghachite David Arquette, Courtney Cox na n'ezie Neve Campbell azụ ọzọ. Onye ọ bụla n’ime ha hụrụ edemede ahụ, wee chee na ọ bụ ihe nwere ọgụgụ isi na-asọpụrụ Wes Craven na ọrụ ya.
“Ndị nduzi bụ ịrịba, ha na-eme ya kpam kpam… ọ bụ ọhụrụ aha. Ọ bụ hip, ọ na-atụ ụjọ. Ọ bụ naanị mkpu Ọhụrụ. Ọ bụghị a reboot, ọ bụghị a remake, ọ bụ naanị a ohuru igba egbe. Echere m na ọ ga-adị mma, ”Cox kwuru n’oge ya Drew Barrymore Gosi.
Na-eti mkpu na-abanye n'ime ụlọ ihe nkiri na Jenụwarị 14, 2022.
You dịla njikere maka Wes Crevenless, na-eti mkpu? Ì chere na oge eruola? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Addams Family 2 na-akpọghachite ezinụlọ wee were ha gaa ezumike na anyanwụ. Lelee ụgbọala na-adọkpụ n’ebe a.